Sida loo Abuuro Xayeysiiska Fiidiyowga ee 'Instagram' oo Adiga Natiijooyin Kuu Helaya | Martech Zone
Xayeysiisyada 'Instagram' waxay adeegsadaan nidaamka xayeysiinta ee Facebook oo dhan oo loo dhan yahay oo dadka u oggolaanaya inay bartilmaameedsadaan adeegsadayaasha iyagoo ku saleynaya da'dooda, danahooda iyo dhaqankooda
63% wakaaladaha xayeysiinta ee ka shaqeeya Mareykanka qorsheeyeen inay ku daraan xayeysiiska Instagram macaamiishooda.
Haddii aad leedahay ganacsi yar ama urur ballaadhan, xayeysiisyada fiidiyowga ee 'Instagram' waxay siiyaan fursado la yaab leh qof walba si uu u gaaro bartilmaameedyadooda bartilmaameedka ah. Laakiin, iyada oo tirada korodhay ee magacyadu ka mid noqdeen qayb ka mid ah barta 'Instagram', ayaa tartanku si xawli ah u socda oo loo tartamaya.
Dib u dhigid kale oo dadka badankood haystaan ​​ayaa ah in sameynta waxyaabaha fiidiyowga ah aysan aheyn sida sawir qaadista ama sameynta waxyaabo qoraal ah. Nasiib wanaag, waxaad abuuri kartaa fiidiyowyo cajiib ah adoo adeegsanaya goobaha duubista kaydka bilaashka ah.
Haddii aadan aqoon u lahayn ereyga, duubista kaydku waa muuqaal bilaash ah oo boqornimo oo aad ka iibsan karto xuquuqda bogagga internetka ee kala duwan. Oo waxaa jira tanno meelo ah oo laga soo xusho. Waa tan liiska
Ku soo noqoshada 2015, Instagram waxay soo bandhigtay xayeysiisyada 'Instagram' ee ka caawiya milkiilayaasha ganacsiyada inay gaaraan kooxda gaarka ah ee adeegsadayaasha oo ugu dambeyntii u beddelaan iibsadayaasha mustaqbalka. Adoo adeegsanaya xayeysiinta Facebook, suuqleyda warbaahinta bulshada ayaa hadda bartilmaameedsan kara qeyb kasta oo gaar ah oo ka badan 600 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon oo Instagram ah. Isku soo wada duuboo, waxaa jira awood balaaran oo jirta, adiga kaliya ayaa ku sugeysa.
Hoos u dhig si aad wax uga barato aasaaska la xiriira abuurista iyo socodsiinta xayeysiisyada ku saleysan fiidiyowga ee 'Instagram'. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale soo bandhigi doonnaa waxqabadyo yar oo ugu wanaagsan oo lagu cabiro laguna casriyeeyo waxqabadka xayeysiinta Laakiin taas kahor, marka hore fiiri deg deg ah 5ta qaybood ee ugu waaweyn ee xayeysiinta fiidiyaha ah ee 'Instagram' waad ordi kartaa si kor loogu qaado dhagaystayaashaada.
Noocyada Xayeysiiska Fiidiyowga ee 'Instagram'
Xayeysiiska Fiidiyowga ee Cunnada ah - qayb caan ah oo ah xayeysiiska fiidiyowga ee 'Instagram' kaas oo xayeysiisyada fiidiyowga ah ay si aan kala go 'lahayn ugu dhex milmaan quudinta isticmaaleyaasha isla markaana ay u bixiyaan hab dabiici ah oo aad ku gaari karto dhagaystayaasha aad bartilmaameedsato.
Instagram Sheekooyinka - xayeysiis fiidiyow oo shaashad buuxda leh oo ka dhex muuqda sheekooyinka qiyaastii 400mn isticmaale ayaa maalin walba arka (laga soo bilaabo isticmaaleyaasha ay raacaan). Sababtoo ah Instagram Sheekooyinka muujiyaan daaqad xaddidan oo 24-saacadood ah, waxay ku habboon yihiin xayeysiinta waxyaabaha xayeysiinta ah iyo heshiisyo waqti-xaddidan iyo dalabyo.
Xayeysiiska Carousel - Xayeysiisyada Carousel, suuqleyda waxay leeyihiin ikhtiyaar ay ku dhiirrigeliyaan badeecad ama adeeg gaar ah iyagoo soo bandhigaya taxane fiidiyoowyo calaamadeysan oo dadka isticmaala ay mari karaan. Meelayntani waxay u fiicantahay noocyada doonaya inay suuq galiyaan waxyaabo badan ama ay kaliya muujiyaan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan cidda ay yihiin iyo waxay bixiyaan. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale ku dari karaan xiriiriye websaydhka sheyga si ay u toosiyaan macaamiisha danaynaya inay iibsadaan wax soo saar.
30-Xayeysiis Video Labaad - Xayeysiinta fiidiyowga ah ee 30-ka ilbiriqsi ah waxaa soo saaray Instagram-ka iyagoo isku dayaya inay u abuuraan dareen shineemaysi is-dhexgal ah martida ku dhiirrigelisa iyaga oo soo jiidan kara hal-abuurka muuqaalka ah.
Marquee Instagram - Instagram waxay dhowaan soo bandhigtay qalab kale oo loo yaqaan 'Instagram Marquee' kaas oo u sahlaya suuqleyda inay faafiyaan wacyigelinta isla markaana gaadhsiiyaan bartilmaameedka dhagaystayaasha muddo gaaban.
Ku Bilaabashada Xayeysiimaha Fiidiyowga ee 'Instagram'
Kahor intaadan bilaabin abuurista xayeysiiskaaga, waxaa muhiim ah inaad barato qaar ka mid ah shuruudaha saamaynta ku yeelan kara tayada guud iyo waxqabadka xayeysiiskaaga Instagram:
Instagram ayaa ogolaaneysa a dhererka qoraalka aan ka badnayn 2200 xaraf. Laakiin, iskuday inaadan dhaafin 135-140 xaraf natiijooyinka ugu fiican
The dhererka fiidiyowyada waa inuusan ka badnaan 120 sekan
Faylasha fiidiyowga waa inay ku jiraan MP4 ama MOV qaab cabir kasta oo fayl ah aan ka weyneyn 4GB
Xayeysiinta fiidiyowga ee ku jira-feed waa inaysan ka badnaan 600 × 750 (4: 5) fiidiyowyada toosan. Xaaladda muuqaalka muuqaalka, xallintu waa inay noqotaa 600×315 (1:91:1) halka loogu talagalay fiidiyowyada laba jibbaaran, waa inay ahaataa 600 × 600 (1: 1)
Sheekooyinka Instagram, xallintu waa inay noqotaa 600 × 1067 (9: 16)
Xayeysiinta fiidiyowga Carousel, xalka ugu habboon ayaa ah 600 × 600 oo leh saamiga 1: 1
Hadda, laga soo bilaabo waayo-aragnimadayda shakhsi ahaaneed ka dib markii aan siiyay adeegyo fiidiyow ah oo fiidiyoow ah boqolaal abuurayaal nuxur leh, waxaan ogaaday in 1: 1 iyo 4: 5 xayeysiisyada fiidiyowga ay si fiican u qabtaan. Marka, markasta oo aad kari karto, isku day inaad ku ekaato saamigaas dhinaca ah.
Sida loo Abuuro Xayeysiiska Fiidiyowga ee 'Instagram' oo Adiga Natiijooyin kuu keenaya - Tallaabo Tilmaame Tallaabo ah
Nasiib wanaag, ma jiro saynis gantaal ah oo ku lug leh sameynta tayo sare leh fiidiyowyada 'Instagram'. Si fudud, raac tilmaamahan lixda-tallaabo ah ee aasaasiga ah si aad u bilowdo:
Talaabada 1: Dooro Ujeeddo
Marka hore iyo tan ugu muhiimsan, waxaad u baahan doontaa inaad doorato ujeeddo. Si fudud haddii loo dhigo, waa inaad qeexdaa taada ujeedada suuq-geyntahoosta qaybtan si loo muujiyo hadafka gaarka ah ee aad doonayso in xayeysiiskaagu gaadho. Ma waxaad raadineysaa inaad kordhiso wacyiga sumadda ama ujeeddadaadu waa inaad kobciso iibkaaga? Aad uga taxaddar xulashada jawaabaha su'aalahan maxaa yeelay waxay saameyn ku yeelan karaan meeleynta waxayna kaa caawineysaa inaad la xiriirto dhagaystayaasha aad rabto ee u badan inay ka jawaabaan xayeysiintaada.
Talaabada 2: Dooro Bartilmaameedka Dhageystayaasha
Tani waa dhinac kale oo muhiim ah oo si weyn u saameeya beddelaadyadaada. Haddii bartilmaameedku yahay mid aan firfircooneyn, ma awoodid inaad beegsato koox gaar ah oo isticmaaleyaasha ah. Waad dooran kartaa goobta, da'da, luqadda, jinsiga ama ikhtiyaarrada kale ee la door bidaayo. Xitaa haddii aad raadineyso inaad bartilmaameed ka dhigato koox da 'gaar ah oo leh heer nololeed gaar ah, waad sameyn kartaa taas sidoo kale.
Marka hubi inaad haysato dhagaystayaasha bartilmaameedsanaya haddii kale qofna ma daawan doono nuxurkaaga.
Talaabada 3: Tafatir Meelayntaada
Ka dib markii aad dooratay dhagaystayaashaada bartilmaameedka, dooro meelaynta. Markaad gujiso xulashadan, meeleynta Instagram iyo Facebook horay ayaa loo shaqeeyay. Guud ahaan, waa inaad awood u siisaa dhammaan meelayntan sidii aad u heli lahayd natiijooyinka ugu fiican. Si kastaba ha noqotee, haddii aad leedahay wax kale oo aad doorbidid ama aad rabto inaad ka saarto wax kasta oo gaar ah, waad beddeli kartaa xulashooyin u dhigma baahidaada.
Tallaabada 4: Miisaaniyadda iyo Jadwalka
Haddii ay dhacdo inaad doorato dalab gacan-qabsi ah, waa inaad dejiso miisaaniyaddaada oo aad u dalabtaa xayeysiiskaaga. Asal ahaan, miisaaniyaddaadu waxay ka tarjumaysaa wadarta kharashka aad diyaar u tahay inaad maal gashato hal guji / tiro cayiman oo dareen ah ama waxyaabo kale oo gaar ah. Tallaabadani waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad dejiso bilow iyo dhammaad taariikhda xayeysiimahaaga.
Tallaabada 5: Abuur Xayeysiiska
Marka, hadda waxaad diyaar u tahay inaad abuurto xayeysiin Instagram kuu gaar ah. Si fudud, dooro nooca xayeysiiska ee aad doorbideyso wax walbana meeshiisa dhig. Sidoo kale, hubi inaad horay u eegto xayeysiiskaaga fiidiyowga ah si aad u hubiso sida ay dhab ahaan uga dhex muuqan doonaan quudinta. Hubso in xayeysiiskaagu u muuqdo mid ku weyn meeleyn kasta sidoo kalena si fiican loo gooyey. Ku dar xiriirinta aad rabto xayeysiiskaaga inuu u isticmaalo isticmaaleyaasha bogga soo degitaanka maaddaama ay soo jiidaneyso iibsadayaasha isla markaana kor u qaadayaan iibka Ha iloobin inaad kudarto wicitaan layaableh oo waxqabad ah (CTA) si aad ugu dhiirrigeliso adeegsadayaasha inay gujiyaan xiriiriyahaaga. Marxaladdan, waxaad sidoo kale ku dari kartaa nuqulkaaga luqado kala duwan haddii aad beegsanayso dhagaystayaasha ku hadla labada luuqadood.
Tallaabada 6: U Gudbi Xayeysiiskaaga si dib loogu eego
Si xeel dheer u baari xayeysiintaada markii ugu dambeysay iyo haddii wax waliba ay ku egyihiin meeleyn kasta, u soo gudbi si dib loogu eego. Waxay qaadan doontaa maalmo dhowr ah in nuqulkaaga la ansixiyo.
Talooyin Ad Million Dollar Instagram
Abuur Hook Hufan - Maskaxda ku hay, dadka isticmaala Instagram-ka si dhakhso leh ayey ugu dhex wareegaan wararka ay soo qorayaan, markaa waa inaad sameysaa ilbiriqsiyada ugu horreeya tirinta xayeysiiskaaga. Fikrad ahaan, waa inaad ku dartaa dhaqdhaqaaqyada iyo ficilada bilowga 3 ilbiriqsi ee fiidiyowgaaga si aad uhesho dareenka. Haddii ilbidhiqsiyada ugu horreeya ee xayeysiintaadu ay gaabis yihiin oo ay weli socdaan, isticmaaleyaashu way rogrogmi doonaan iyaga oo aan fiirsan fiidiyowgaaga.
Qoraalka sawirada - Abuuritaanka gogosha banger ee ka soocda taajka ayaa aad muhiim u ah. Marka ha iloobin habsami u socodka tafatirka fiidiyowga. Ka dib markaad filim duubto ha u soo dhigin muuqaallada ceeriin barta Instagram. Waqti qaado si aad wax uga beddesho fiidiyowyadaada qaab soo jiidasho leh, oo indhaha soo jiidasho leh.
Kudar Qoraal - Maaddaama, ikhtiyaarka codka loo dejiyey aamusnaan ahaan, waa inaad ku dartaa xoogaa qoraal ah si aad farriintaada ugu gudbiso. Waxaa jira barnaamijyo badan oo la heli karo maalmahan sida Clips Clips oo kaa caawin kara inaad abuurto saameyn qoraal oo firfircoon si aad uhesho dareenka.
Xalliyaan Dhibaato - Ujeedada aasaasiga ah ee loo abuurayo xayeysiisyada 'Instagram' waa in la aqoonsado dhibaatada lana hindiso xalka ugu habboon qaab wax soo saarka / adeegga gaarka ah. Marka xayeysiintaadu ay aragti ka dhiibato xallinta dhibaatada, isla markiiba waxay la yeelataa xiriir shucuur leh isticmaalaha. Markaad ku guuleysato inay ku guuleystaan, tus sida badeecadaada / adeeggaagu u noqon karo badbaadiye iyaga.
Ka fogow Qoraal Dheer - In kasta oo Instagram ay u oggolaanayso 2200 oo xaraf cinwaan ah, waxaa fiican in laga dhigo mid gaaban oo macno leh. Si kastaba ha noqotee, qofna ma doonayo inuu akhriyo qaybo badan oo qoraallo murugsan leh. Marka, hubi inaadan ka badnayn xarfaha 130-150 intaad u qoraysid cinwaan xayeysiiskaaga 'Instagram'.
Diirada saar Ujeedada Keliya - Halkii aad diiradda saari lahayd ujeeddooyin badan, iskuday inaad ku ekaato ujeeddada keliya. Haddii xayeysiintaadu ay ku jiraan dhibco badan oo iibin ah, waxay umuuqan doontaa sida garoonka oo kale isticmaaleyaashuna si fudud ayey u dhaafi doonaan xayeysiiskaaga.
Iskudar si dabiici ah - Xayeysiisyadaada la abuuray waa inaysan u muuqan kuwo dhiirrigelin ah waana inay si dabiici ah ugu dhex milmaan cunnooyinka Instagram Maskaxda ku hay, ujeedkaagu waa inaad soo jiidato dareenka dhagaystayaashaada oo aad siiso xalka ugu fiican ee ugu wanaagsan ee mashaakilkooda.
imtixaanka - Fikrad ahaan, waa inaad abuurtaa noocyo badan oo xayeysiisyada fiidiyowga ah si aad u hubiso midka si fiican ula shaqeynaya bartilmaameedkaaga. Hubso in xayeysiiskaaga Instagram uu bixinayo waayo-aragnimo weyn isla markaana adeegsadayaashu ay ku wajahan yihiin beddelaad.
Instagram waxay noqon kartaa madal suuq weyn, kuu saamaxaysa inaadan abuurin oo keliya wacyigelin calaamadeysan oo aad ku ballaariso sumaddaada fiidiyoow iyo muuqaalka is-dhexgalka leh, laakiin sidoo kale u kaxeyso taraafikada dabiiciga ah websaydhkaaga isla markaana dhiirrigeliso beddelaad.
Maxay yihiin talooyin kale oo aad ku dari lahayd liiskan? Kee ayaad qorsheynaysaa inaad marka hore isku daydo? La socodsii qaybta faallooyinka ee hoose waxaanan ku farxi lahaa inaan ku soo biiro wadahadalka.
Tags: sida loo isticmaalo xayeysiiska fiidiyowga ahxayeysiinta instagramxayeysiiska carousel instagramxayeysiiska fiidiyowga ee 'instagram'cabbirka fiidiyowga ee 'instagram'talooyinka xayeysiinta ee fiidiyowga ah ee 'instagram'tallaabooyinka xayeysiinta fiidiyowga ee 'instagram'sawirka fiidiyowga instagramtafatirka fiidiyowga instagramqoraalka fiidiyowga instagramfiidiyowga instagram
Cristian Stanciu waa tifaftire fiidiyow oo madaxbanaan, milkiilaha iyo iskuduwaha soo-saarka kadib Warbaahinta Veedyou - shirkad siisa adeegyo tafatirka fiidiyowga sawir qaadayaasha, wakaaladaha suuq geynta, istuudiyaha wax soo saarka fiidiyowga ama noocyada adduunka oo idil.